Sports myanamr - Myanmar no 1 football news website - Page 7
အိမ်ပြန်သူ အိမ်ပြောင်းသူ တို့နဲ့ . . . ဒီတပတ်မှာ မြင်တွေ့ရနိုင်တဲ့ Debut ကစားသမား ၁၀ ယောက်
အပြောင်းအရွှေ့ ပိတ်သွားခဲ့တာ ရက် အနည်းငယ် ကြာသွားခဲ့ ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ ကြားခံ သွားတာကြောင့် Deadline Day အနီးတဝိုက် က ခေါ်ယူ မှုတွေဟာ အသင်းသစ် နဲ့ ချက်ချင်း မပူးပေါင်း နိုင် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက် အတိုင်း မှာတော့ …
GOAT အဖြစ် သတ်မှတ် ခံထားရတဲ့ အာဆင်နယ် အမျိုးသမီး တိုက်စစ်မှူး မီဒမ်မာ ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက် ၁၁ ချက်
September 10, 2021 September 10, 2021 - by Editor
အာဆင်နယ် အမျိုးသမီး အသင်း တိုက်စစ်မှူး မီဒမ်မာ ဟာ မနေ့ညက Slavia Prague ဘက်ကို ဟက်ထရစ် သွင်းယူ ပြီးနောက် ဂန်းနား ကစားသမား ဘ​ဝ သွင်းဂိုး ၁၀၀ ပြည့်မြောက် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။မီဒမ်မာ ဟာ Slavia ဘက်ကို ၁၂ မိနစ် အတွင်း သုံးဂိုး …
Ligue / News
သူ့ဘ၀ ရဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံး အိပ်မက် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီလို့ ဝမ်းသာမျက်ရည်တွေနဲ့ မက်ဆီ ပြောဆို
လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ ဒီကနေ့ နံနက် ( တောင်အမေရိက ညခင်း ) မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ မှာ အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် ဟက်ထရစ် သွင်းယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ အာဂျင်တီးနား က ဘိုလီဗီးယား ကို ၃ – …
ဒီမီတာဘာဘာတော့ဖ်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းကို ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းကြောင့် အန်သိုနီမာစီရယ်ဟာ ထိခိုက် နစ်နာသူ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပြီး ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အနေနဲ့ ကလပ်မှာ သူ့ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ပွဲ၀င်သွားရန် တိုက်တွန်း သွားခဲ့ပါတယ်။ အက်ဒီဆင်ကာဗာနီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက မာစီရယ်ကို ကျော်ကာ နည်းပြ …
FIFA ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ UEFA ၊ အိမ်ရှင်ပြောင်းတော့မယ့် ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် UEFA ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို ၂ နှစ် တကြိမ် ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ( ဖီဖာ ) ရဲ့ အစီအစဉ် ကို ကန့်ကွက် ကြောင်း ပြောဆို လိုက်ပြီး အတင်းအကြပ် လုပ်ဆောင် ပါက ဥရောပ ဘောလုံး …